Masayendisiti akawana simba hwokuti Moon ingasanganisira guru yakawanda mvura yaro chivako. Izvi zvinogona kubatsira chaizvo kuti zvidzidzo hwemwedzi pamusoro ramangwana.
Kudzidza nesayenzi chaiitirwa ne vaongorori pana Brown University mu Rhode Island uye inobudiswa Nature Geoscience. Masayendisiti akadzidza chirongwa kubatwa dzemvura inobatwa kuputika magirazi kuburikidza womudenga pamusoro. Zvakasara womudenga volcanism nhoroondo kwemabhiriyoni emakore.
"Nhoroondo maonero aiva kuti Moon rakanga rakaoma zvachose nyika - vakati kudzidza kunoita munyori Ralph Milliken. - Asi isu vachiri kuramba kuziva kuti haisi, uye chokwadi nyika kunogona zvikuru zvakafanana Earth maererano Kuwanikwa mvura nezvimwe kugadzikana magasi ".
Previous tsvakurudzo basa
Zvidzidzo Previous vakashandisa ivhu vakawana panguva nzvimbo kutiza Apollo 15 uye 17, muna 1971 uye 1972, chinangwa yaiva pakudzidza mvura mwedzi.
Muna 2008, masayendisiti akawana zvisaririra remvura dzimwe marozari, zvinosanganisira kuputika rinoonekera. Zvakanga vaifungidzira kuti Moon ave nyorova.
Kunyange uwandu mvura pamusoro mwedzi diki yaizova zvakakwana kusika zvinokosha deposits kuti kuputika rinoonekera. Kana dhaka achiumbwa pamwe rinoshamisa rapidity, ayo samolecular mamiriro haana nguva realign pachavo mu "kuipa" uye matombo muviri pachinzvimbo tinoshandurirwa girazi. Small mumate dhaka kukandwa mumhepo, sezvinoita mutemo, vari mudzoke kunyika vitreous, asi kungoerekana kutonhora mumvura zvimwechetezvo.
Nepo zvidzidzo yapfuura nezvezvaiitwawo ivhu vakauya Apollo, mu Latest kwesayenzi ichi pachinzvimbo zvinhu vakashandisa Satellite Data unganidzwa pamusoro womudenga orbiter India Chandarayaan-1. Patinodzidza chiedza kunooneka kubva mwedzi pevhu, vatsvakurudzi vaigona tione mhando zvicherwa varipo mairi.
Sechivako mvura pamusoro mwedzi
Zvinenge zvose huru pyroclastic deposits pamusoro pemvura Moon, inova paneshongwe nyika inoumbwa munhu kuputika kuputika, vaongorori vakawana uchapupu mvura iri muchimiro marozari ose kuputika rinoonekera. Izvi zvinoratidza kuti chikamu jasi mwedzi ingasanganisira mvura yakawanda sezvo pane Panyika.
"Mvura tinowana, vangava sezvo OH (hydroxide chicherwa), kana H 2 O, asi isu vakafungidzira kuti inyaya iri OH" - akadaro musayendisiti Millikan.
Hazvina kujeka kana mvura iri kuunzwa mwedzi comets kana asteroids, kana dai kare kuvapo kwayo chivako. Kufarira ndechokuti inogona nyore kuwana kupfuura chando chando pamusoro namatanda. Mvura inogona kubviswa granules kuburikidza muchidziisa yakakwirira tembiricha.
"Chinhu chinobatsira kufambisa basa ramangwana womudenga vatsvakurudzi nokuva kushandisa mvura yakawanda kubva mumba - ichi idanho guru mberi, uye edu zvine yakazarukira vanhu mumwe nzira itsva," - mashoko anoti kudzidza co-munyori Li Shuai.
Marongerwo uye tenzi urongwa Concrete chirimwa
Physical mananara - ndiyo nyika yakatipoteredza
Basic oxides vavo zvivako
Beaufort Scale sezvo chinhu chinokosha wekushandisa ano
Mhotsi dzangu Kukosa - nezano mubatsiri Fisher
Words chekutenda shamwari uye vadiwa
The kweropa maitiro kwevanhu uye pakarepo ropa
Bursitis. Mabatirwo zvavo mishonga
How kuti WZ 111 muna World pamusoro Motokari dzehondo
Miitiro kuti kuchikutadzisa kuwana mukana kurarama akwegura
Wonder the World - Niagara Falls
Most masangano zvakanaka muMoscow: review, rating, madhipatimendi, unyanzvi
Funny pasherefu Peter 1: The hwaro uto Russian
Nzira yokubudisa muRoma: sei ikoko. Reviews